सीमा बचाउँदा सरकार ढले ढलोस्, भारतले मिचेकाे नेपाली भूमि फिर्ता गराएरै छाड्छुः प्रम ओली « Deshko News
उनले प्रश्न गरेः मैले सीमा जोगाउनुपर्छ कि सरकारमा रहनुपर्छ? सीमा जोगाउनका लागि भक्ति थापा तोपको भुमरीमा उडेका होइनन् ? बलभद्रहरु पानी खान नपाएर पनि लडेका होइनन् ? अमर सिंह थापा तरवार लिएर मैदानमा उत्रिएका होइनन् ? त्यसकारण मेरो पद, ज्यान होइन, राष्ट्र राष्ट्र हो, राष्ट्रको भूमि राष्ट्रको भूमि हो ।
ओलीले थपे, ‘अहिले कुरा उठेको यहीँ भावनाका साथ काम गर्न सक्छ भनेर होला । पदको वास्ता नगर्ने, पदभन्दा माथि उठ्ने प्रधानमन्त्री छ भनेरै होला ।’ कालापानी लगायत सीमा विवादमा नरेन्द्र मोदीसँग आफूले खुलस्त गर्नसक्ने स्पष्ट पार्दै ओलीले तल्लो तहबाट पनि समाधान हुनसक्ने बताए ।